Waa maxay xilka cusub ee loo magacaabayo Sheekh Shariif? | KEYDMEDIA ENGLISH
Madaxweynihii 7-aad ee Soomaaliya Sheekh Shariif, ayaa la sheegayaa in loo magacaabi doono xil ku meel gaar ah oo uu si mutadawacnimo ah ugu adeegi doono dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ayaa la warinayaa inuu aqbalay, in loo magacaabo, Ergayga gaarka ah ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan Arrimaha Dib-u-heshiisiinta Qaran iyo wada hadalka Soomaaliya iyo Maamulka gooni u goosadka ah ee Soomaaliland.
Shaqsiyaad aad ugu dhow, hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran, Sheekh Shariif, oo Keydmedia Online, la xariirtay, ayaa ka gaabsaday in ay xaqiijiyaan jiritaanka arrinkaan, hayeeshee, ilo loo qaateen ah, ayaa warinaya in Madaxweynihii hore aqbalay inuu qaato masuuliyadda xilkaas, waliba si mutadawacnimo ah.
Shariif, wuxuu soo noqday Madaxweynihii 7-aad ee Soomaaliya, hadda waa Xildhibaan ka tirsan Golaha shacabka, wuxuu ka mid ahaa shantii musharrax ee ugu codadka badnaa doorashadii Madaxweynaha ee dhacday 15-kii May 2022, wuxuuna hoggaan u yahay mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ugu miisaanka culus dalka.
Shalay ayay ahayd, markii Ergayga gaarka ah Arrimaha Abaaraha iyo Bini-aadannimada Soomaaliya, loo magacaabay Hoggaamiyaha Xisbiga Wadjir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ay siyaasad ahaan iska aragti dhowyihiin, Madaxweynaha 10-aad ee JFS, Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo hadda u muuqda inuu qaatay door wada shaqeyn ah.